သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံအနှံ့ခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်အား ဇွန် ၂၁ ရက်အထိ ထပ်မံသက်တမ်းတိုး - Xinhua News Agency
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံအနှံ့ခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်အား ဇွန် ၂၁ ရက်အထိ ထပ်မံသက်တမ်းတိုး
INTERNATIONAL ORGANIZATION မြန်မာ-ENG
INTERNATIONAL ORGANIZATION မြန်မာ-中文
Africa & Middle East INTERNATIONAL ORGANIZATION မြန်မာ-ENG
COVID-19 ဗီဇမျိုးကွဲသစ်တွေ့ရှိသည့် အာဖရိက ၇ နိုင်ငံကို အစ္စရေးနိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထား
ကနေဒါနိုင်ငံက Sinopharm ၊ Sinovac ၊ COVAXIN ဖြင့် ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးထားသော ခရီးသွားများကို ဝင်ခွင့်ပြု
Europe INTERNATIONAL ORGANIZATION မြန်မာ-中文
ပြင်သစ်၌ ကိုဗစ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု မြှင့်တင်သွားမည်
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း အကျဉ်းထောင်များတွင် ဝန်ထမ်းရှားပါးမှုဖြင့် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြုံတွေ့နေရ
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့စွန်ရှိ Kolonnawa မြို့၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှ ဒေသခံများအတွက် PCR စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်နေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကိုလံဘို၊ ဇွန် ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ COVID-19 ထပ်မံကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်ရန် လက်ရှိချမှတ်ထားသော နိုင်ငံအနှံ့ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ချက်အား ဇွန် ၂၁ ရက်အထိ ထပ်မံသက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ဇွန် ၁၁ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတ Gotabaya Rajapaksa နှင့် COVID-19 လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကြား အစည်းအဝေးပြီးနောက် သမ္မတက ခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်အား သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် ယင်းကန့်သတ်ချက်အား ဇွန်၂၁ ရက် နံနက် ၄ နာရီတွင် ပယ်ဖျက်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဌာန အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Shavendra Silva က ဆင်ဟွာသို့ ပြောသည်။
ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ချက်အား ယခင်က ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် ရုပ်သိမ်းနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြကြောင်း သိရသည်။သို့သော် အဝတ်အထည်စက်ရုံများအပါအဝင် စက်ရုံများအားလုံး၊ အဓိကဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများ၊ မရှိမဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးစင်တာများ၊ စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်သူများ၊ သဘာဝဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်သူများအား ကန့်သတ်ချက်ကာလအတွင်း ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Silva ကဆိုသည်။
ကျန်သူများအားလုံးအား နေအိမ်တွင်သာ နေထိုင်ရန် တိုက်တွန်းကြောင်း Silva ကဆိုသည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု တတိယလှိုင်းအတွင်း ကျရောက်လျက်ရှိပြီး ဇွန် ၁၁ ရက်အထိ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း အရေအတွက် ၂၁၈,၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်လအတွင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ဒေသအများအပြား၌ ဗီဇပြောင်း COVID-19 Delta နှင့် Alpha တို့အား တွေ့ရှိခဲ့ပြီး COVID-19 အတည်ပြုလူနာပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ကျော် တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးအရာရှိများက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
COLOMBO, June 11 (Xinhua) — Sri Lankan authorities on Friday said an ongoing nationwide travel restriction would be extended till June 21 in order to prevent further spread of COVID-19.
Army Commander and Head of the National Operations Center for the Prevention of COVID-19, General Shavendra Silva told Xinhua that followingameeting held between the COVID-19 task force and President Gotabaya Rajapaksa, the president had instructed to extend the travel restriction and lift it on June 21 at4a.m.
The travel restriction was initially expected to be lifted on June 14.
However, Silva said that all factories including apparel factories, major construction projects, essential services, economic centers, those involved in agricultural projects, and organic fertilizer manufacturers would be allowed to operate even during the restrictions.
All others were urged to stay at home, Silva said.
Sri Lanka is presently in the midst ofathird wave of the COVID-19 virus with over 218,000 COVID-19 patients reported to date.
Within the past two months alone, over 100,000 new infections have been reported as Sri Lanka has detected new Delta and Alpha variants of the COVID-19 from several areas, health officials said. Enditem
ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံက လာမည့် ဟာဂျ်ဘုရားဖူးရာသီတွင် ပြည်တွင်းဘုရားဖူးများကို အကန့်အသတ်ဖြင့် ခွင့်ပြုသွားမည်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု စုစုပေါင်း ၈၂၂,၀၀၀ ကျော်ရှိလာ
သီရိလင်္ကာ ကူးတို့လှေ တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် လူ ၆ ဦး သေဆုံးကာ ၁၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် အသက် ၆၀ နှစ်အထက်ရှိသူများအား အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းစတင်
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ သိပ္ပံပညာရှင်များက ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် သိုလှောင်ထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအား မျှဝေပေးရန်တိုက်တွန်း